Etazonia: Feo Tsy Misy Latsa-bato (Voices Without Votes) · Global Voices teny Malagasy
Etazonia: Feo Tsy Misy Latsa-bato (Voices Without Votes)
Voadika ny 21 Jolay 2017 3:27 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Deutsch, عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Febroary taona 2008 ity lahatsoratra adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Vitsy ireo lohahevitra manitikitika ny sain'ireo bilaogera manerantany – ary iray amin'izy ireo ny politika ivelany an'i Etazonia. Ankehitriny, manangana tranonkalam-baovao miaraka amin'ny Reuters ny Global Voices izay manokatra varavarankely ho any amin'ny adihevitra manerantany momba ny fifidianana filoham-pirenena 2008 ao Etazonia.
Antsoina hoe Voices Without Votes izany.
Mihaika ny vahoaka hihaino ireo olona ivelan'ny sisintanin'izy ireo ny Global Voices. Adikanay izany avy eo avy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ao Afovoany Atsinanana, Azia, Afrika, Amerika Atsimo, ary Eoropa Atsinanana ary manantena izahay fa afaka mifankahazo sy mifampihaino mihoatra sisintany ny olona.
Mandrisika ny haino aman-jery iraisampirenena ihany koa izahay mba hiresaka sy hitatitra izay mampanahy ny olon-tsotra manerana izao tontolo izao. Antenaina fa ho traikefa mandresy lahatra sy hiteraka hevitra ny fijerena ny politika Amerikana akaiky kokoa amin'ny alalan'ireo loko isankarazan'ny ny bilaogy manerantany. Alefaso aminay ny rohin'ny bilaogy tianao hozarainay, anisan'izany ny anao manokana.
Hanitsy sy hanoratra ao amin'ny tranonkala miaraka amin'ny fanampian'ireo tonian-dahatsoratra sy mpilatsaka an-tsitrapo ato amin'ny Global Voices ny Tonian-dahatsoratray avy ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, Amira Al Hussaini. Jereo matetika ny ao amin'ny Voices Without Votes mandra-paha tonga ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Novambra 2008.
Mandritra izany, miresaka izao tontolo izao, Mihaino va ianao?